कहाँ पुग्यो रविले घोषणा गरेको रासकोटको दक्षिण एशियाकै नमूना अस्पताल ? – PanchKhal Online
Home/समाचार/कहाँ पुग्यो रविले घोषणा गरेको रासकोटको दक्षिण एशियाकै नमूना अस्पताल ?
कहाँ पुग्यो रविले घोषणा गरेको रासकोटको दक्षिण एशियाकै नमूना अस्पताल ?
काठमाडौं । गएको चिसो मौसममा रवि लामिछाने ‘सिधा कुरा जनतासँग’को टिमसहित बुद्ध एयरमा चढेर हानिए, विकट जिल्ला कालीकोटको रासकोटतर्फ । उनले रासकोट पुगेर मध्यरातमै आजीवन त छँदैछ, मरेपछि पनि निःस्वार्थ समाजसेवा गर्ने घोषणा गरे । उनले त्यहींबाटै विकट कर्णालीको कालीकोटमा रहेको रासकोटमा १५ बेडको दक्षिण एशियाकै पहिलो डिजिटल नमूना अस्पताल बनाउने घोषणा गरे ।
कार्यक्रम प्रस्तोता रवि लामिछानेले ११ जनवरी २०१९ का दिन कालीकोटबाटै यस्तो स्टाटस लेखे, ‘‘विकट कर्णाली प्रदेशको कालिकोटबाट यो पोस्ट लेख्दै छु । आजदेखि आजीवन र मृत्युपछि पनि समाज सेवामा निःस्वार्थ संलग्न हुने आधिकारिक प्रण गर्दछु । योसँगै ‘रवि लामिछाने फाउन्डेसन’को आधिकारिक जानकारीसहितको प्रतिबद्धता सगौरव सार्वजनिक गर्न चाहन्छु । पहिलो प्रयास स्वरुप विकट कर्णालीको कालिकोटमा रहेको रासकोटमा अब स्मार्ट डिजिटल अस्पताल बन्ने छ । दक्षिण एसियाकै नमुना हुनेछ, १५ बेडको ‘रासकोट सामुदायिक अस्पताल’ । इन्टरनेटले साथ दिए केही घण्टामा रास्कोट पुगी Live आउनेछु ।’’
उक्त घोषणासँगै एउटा अनलाइनले यस्तो लेखेको छ, ‘‘केही समयअघि टेलिमेडिशिन प्रोजेक्टमा काम गर्दै गर्दा कालिकोट पुगेको डा. मुकुल ढकालले यस्तै दृश्य अनगिन्ती देखे । दम, खोकीमा समेत उपचार पाउन मुश्किल गाउँको स्वास्थ्य चौकी, दैनिकजसो भीरपाखा गर्दा घाइते भएर उपचारबिनै बल्झिरहेका सर्वसाधारणका घाउ, डोकोमा बोकेर ६ घण्टा यात्रा तय गर्नुपर्ने उनीहरुको बाध्यता देखेपछि आफ्नै सहकर्मी फार्मेसिस्ट कविन मलेगु, न्युज २४ टेलिभिजन र पत्रकार रवि लामिछानेसँग यही अवस्था सुनाए र सुरु भयो कर्णाली प्रदेशको कालिकोटस्थित रास्कोट नगरपालिकामा रास्कोट सामुदायिक अस्पताल अभियान । डा. मुकुल ढकाल तथा ‘सिधा कुरा जनताँसग’ कार्यक्रम सञ्चालक पत्रकार रवि लामिछानेले विधिवतरुपमा नै अस्पताल निर्माणको अभियान सुरु गरे । कालिकोट सामुदायिक अस्पताल पूर्णरुपमा स्थानीयको स्वामित्वमा रहेको अस्पताल हुने छ ।’’
प्रदेश सरकार, नगरपालिका तथा स्थानीयले नै यो अस्पताल दीर्घकालीन सञ्चालन तथा व्यवस्थानको जिम्मा हुने बताइएको थियो । अस्पताल सबै डिजिटल पद्धतिमा सञ्चालनमा आउने र एकपटक अस्पतालमा दर्ता भएका बिरामीको रेकर्ड अस्पतालको सर्भरमा रहिरहने व्यवस्था मिलाइने बताइएको थियो । अस्पतालमा उपलव्ध नभएको सेवाको बारेमा इन्टरनेट प्रविधिमार्फत समन्वय गरी उपचार गरिने र उक्त अस्पतालमा १५ शैयाको हुने बताइएको थियो । त्यस्तै तत्काल १ जना एमडीजीपी चिकित्सक, ४ जना एमबिबिएस चिकित्सक रहने अस्पतालमा मासिक, चौमासिक तथा अर्धबार्षिक रुपमा विशेषज्ञमार्फत सेवा दिइने घोषणा गरिएको थियो । सबै सेवा सरकारी अस्पतालकै शुल्क लिइने र एपेन्डिसाइड लगायत इमरजेन्सी शल्यक्रिया हुने बताइएको थियो । ५ करोडभन्दा बढीको लागतमा बन्ने अस्पतालका लागि रासकोट नगरपालिकाले २ सय २२ रोपनी जग्गा उपलव्ध गराइएको थियो ।
अस्पताल निर्माण भएपछि रासकोट नगरपालिका, शान्मी त्रिवेणी गाउँपालिका, पचलझर्ना गाउँपालिका तथा बाजुराको जगन्नाथ गाउँपालिका, बुढीनन्दा गाउँपालिकाका करिब १ लाख स्थानीय प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने भनिएको थियो । अस्पताल निर्माण भएमा सामान्य उपचारकै अभावमा ज्यान गुमाउनुपर्ने बाध्यता हट्ने स्थानीयले आशा गरेको बताइएको थियो ।
अस्पताल निर्माणका लागि देश विदेशबाट अभियन्ताहरुले १ करोड सहयोग संकलन गरिसकेको र अब तीब्रगतिमा आर्थिक अभियान चलाइने बताइएको थियो । कालीकोटबाटै प्रसारण गरिएको भनिएको सोही समयको ‘सिधा कुरा जनतासँग’ मा उनले नेताहरुलाई गाली गर्दै उक्त अस्पतालका लागि सहयोग गर्न स्वदेश तथा विदेशका दर्शकहरु गुहारेका थिए । कर्णालीबाटै पोष्ट गरिएको भनिएको स्टाटससँगै उनले ‘रवि लामिछाने फाउन्डेशन’को घोषणा पनि गरेका थिए ।
उक्त अस्पताल के भइरहेको छ भन्ने विषयमा रासकोट नगरपालिकाका प्रमुख काशी बराल खासै बोल्न चाहेनन् । यद्यपि उनले भने, ‘अस्पतालको काम शुरु भएको छ ।’
विभिन्न ठेक्कापट्टामा ठूलो धनराशी बटुलेको आरोप समेत खेप्दै आएका लामिछानेमाथि अनुसन्धानको सुई सम्पत्ति छानविन मुद्दातर्फ पनि घुम्ने बताइएको छ । लामिछानेमाथि हुण्डी कारोबारीको पनि आरोप लाग्दै आएको छ । मृतक शालिकराम पुडासैनीको मोबाइलमा रवि लामिछानेको टिमलाई दिनुअघि खिचिएका विभिन्न चेकहरुको फोटोहरु पनि भेटिएको खुल्नमा आएको छ । त्यसबाहेक ‘समाजसेवा’का नाममा विदेशमा रहेका हजारौं सिधासादा नेपालीहरुलाई भावनात्मकरुपमा उद्वेलित गराएर जम्मा गरेको अन्य रकमहरुको पनि सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दामा पनि लामिछानेमाथि अनुसन्धान थालिएको छ ।